साना दलबाट मन्त्री खान ठूलो दौड, कसले मार्ला बाजी ? « Pahilo News
साना दलबाट मन्त्री खान ठूलो दौड, कसले मार्ला बाजी ?
प्रकाशित मिति : 1 September, 2016 2:31 pm
१६ भदौ । साना दललाई दिने भनेर प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहालले आफूसँग राखेका चार मन्त्रालयमा आँखा गाड्दै साना दलका नेताहरुले दौडधुपमा लागेका छन् । केपी ओलीलाई फकाएर मन्त्री भएका तर पछि उक्त सरकार संकटमा पर्नासाथ साथ छाडेर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा सामेल भएकाहरु यसमा अझ बढी सक्रिय छन् ।
कांग्रेसलाई १५, राप्रपालाई दुई, नेकपा (संयुक्त) लाई एक र आफूलाई आठ मन्त्रालय भागबन्डा गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालसँग महिला, वालबालिक तथा समाजकल्याण, खानेपानी तथा सरसफाइ, विज्ञान तथा प्रविधि र पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय छन् ।
खारेज भइसकेको समाजवादी जनता दलका अध्यक्ष तथा सांसद प्रेमबहादुर सिंह यसमा सक्रियतापूर्वक लाग्नेमा पहिलो नम्बरमा छन् । केपी ओलीलाई पागल घोषणा गर्ने दाहालको मोर्चाका प्रवक्ता रहेका उनी पछि ओलीलाई नै पट्याएर खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बनेका थिए । तर, त्यो सरकार संकटमा पर्नासाथ राजीनामा दिएर दाहाललाई साथ दिएका उनी मन्त्री बन्नेमा ढुक्क नै देखिन्छन् । ‘तपाईं फेरि मन्त्री बन्दै हुनुुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा हो, हेरौँ– के हुन्छ ?’ ०५३ सालमा एमालेबाट पहिलो पटक कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री बनेका सिंहले ०६६ सालमा माधव नेपालको नेतृत्वमा पनि त्यही मन्त्रालय सम्हालेका थिए । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि चाहिँ भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्रालयमा फुटाएर उनकै लागि खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय बनाइएको थियो । स्रोतका अनुसार, पहिल्यै बचन दिइसकेका कारण उनलाई मन्त्री बनाउनेमा प्रधानमन्त्री दाहाल सकारात्मक छन् ।
यसपटक जसरी पनि मन्त्री नभई नछाड्ने अभियानमा लागेका अर्का सांसद हुन्, नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साह । केपी ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा पहिला मत दिन्छु भनेर पछि कतैबाट फोन आएपछि त्यस्तालाई कहाँ मत दिन्छु भन्दै सभामुखले नाम बोलाउँदा अनुपस्थित रहेका साह त्यही साइनो लगाएर यसपटक मन्त्री बन्ने चक्करमा छन् । अघिल्लो संविधानसभामा छोरी गायत्री साहलाई सांसद बनाएर उनको रातो पासपोर्ट बेच्न भ्याएका साह यसपटक खम्बुवानका आरके खम्बु, अखण्ड नेपालका कुमार खड्का, स्वतन्त्र सांसद् चन्द्रेश्वर झासमेतलाई साथमा लिएर मन्त्री बन्ने अभियानमा छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले ‘तपाईंहरु मिलेर आउनुभयो भने म एक मन्त्री दिन्छु’ भनेका कारण पनि भ्यागुताको धानी जुटाउन लागेका छन् । मन्त्री बन्नका लागि साहले यतिसम्म गरेका छन्, प्रधानमन्त्री दाहाललाई विपक्षी एमालेका कुनै नेतामार्फत समेत फोन गर्न लगाइसकेका छन् ।
मन्त्री हुने सपना देखेर दौडधुप गरिरहेका अर्का व्यक्ति हुन्– दलित जनजानति पार्टीका विशेन्द्र पासवान । अघिल्लो दिनसम्म केपी ओलीलाई साथ दिइन्छ भन्दै चर्का कुरा गर्ने पासवान भोलिपल्ट फुत्त दाहालका पक्षमा लागेका थिए । उनलाई दाहालले बचन चाहिँ नदिए पनि निकै महत्व दिएर कुरा गरेपछि मन्त्री हुन पाइने आशामा कुदिरहेका छन् । कहिले संसद्मा कुर्सी भाँचेर र त कहिले कर्मचारीसँग झगडा गरेर चर्चामा आउने उनी ओली सरकारका बेलामा वावावरणमन्त्री थिए ।
संसद्का जेष्ठ सदस्य लक्ष्मण राजबंशी पनि यसपटक मन्त्री बन्ने चक्करमा छन् । २००७ सालअघि बाट राजनीति सुरु गरेका र नेकपामा संस्थापक पुष्पलालका समकालीन ८१ वर्षीय राजबंशी नेवाः पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बन्न लबिङमा छन् । सिद्धार्थ बनस्थली स्कुल स्थापना गरेर हजारौँ विद्यार्थीलाई स्तरीय शिक्षा दिएका राजबंशीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटेर आफ्नो कुरा राखिसकेका छन् ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई प्रभावमा पारेर शान्ति तथा पुनर्निमाण जस्तो ठूलो मन्त्रालय हत्याउन सफल परिवार दलका एकनाथ ढकाल मन्त्री बन्नका लागि कुदेको कुद्यै गर्ने अर्का पात्र हुन् । बाबुराम भट्टराईका पालमा एक सिटले गरिवी निवारण र ओलीका पालामा दुई सिटले शान्ति मन्त्री पड्काएका ढकालले मन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री दाहालपत्नी सीतालाई समेत गुहारिरहेका छन् । नेपालमा क्रिस्चियन धर्मको खुल्ला प्रचारक र त्यही कारण समानुपातिकमा मत बढाइरहेका ढकालले बालुवाटारबाट सकारात्मक संकेत भने पाइसकेका छैनन् ।
त्यस्तै थरुहट पार्टीकी रुक्मिणी चौधरी, अखण्ड नेपाल पार्टीका कुमार खड्कालगायत पनि मन्त्री बन्ने दौडमा सक्रिय छन् ।
स्रोतका अनुसार, कांग्रेससले दुई मन्त्रालय थप लगेका कारण माओवादी पनि साना दलका लागि छुट्याइएका चारमध्ये दुई मन्त्रालय आफैँ राख्ने योजनामा छ । पार्टीबाट महिलालाई मन्त्री बनाइएन भन्ने आलोचना भएकाले दुईमध्ये एकमा महिला बनाउनुपर्ने भयो भनेर दाहालले सल्लाह गरिरहेको थाहा भएको छ । तर, उनी भारत पुगेर नफर्किउञ्जेलसम्म नयाँ मन्त्री थपिने सम्भावना नभएको बताइन्छ ।